यस्ता छन् स्वस्थ जीवन र लामो आयु बाँच्न के के खाने ? जानी राखौ
आँखा चिलाउने समस्याको घरेलु उपचार
स्वास्थ्यका लागि गाईको दुधको महत्व (Importance of Cow’s Milk for Health)
स्वस्थ जीवन र लामो आयु बाँच्न के के खाने ?
अगस्ट 9, 2019 अगस्ट 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आयु, डा. राम बहादुर बोहरा, स्वस्थ
स्वस्थ रहन हामीले के कस्ता खाना खानुपर्छ र यस्ता प्रकारका खानाले धेरै बाच्न सहयोग गर्नेछ । आज हरेक बस्तुमा विषादी हालेको बस्तु चाहे त्यो तरकारी होस् या धान चामल किन नहोस् यसले स्वास्थमा असर नगर्ला भन्न सकिदैन । नेपाली रोगी हुनुमा खानपिनको कारण प्रमुख रहेको देखिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य ठिक होस् बढी बाच्न सकियोस भन्ने चाहना हुनेहरूका लागि आज मैले के के खाने भन्ने विषयमा प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु ।
बजारमा यस्ता अनेकौं क्यामिकलयुक्त खाना पलास्टिकमा प्याक भएर आएका छन् । हामीले यस्ता खाना केहि नसोची खाने गर्दछौं । आफ्नो स्वास्थ्य ठिक होस् भन्ने चाहना हुनेले यस्ता बस्तुबाट टाढा रहनु नै फाइदा हुनेछ । आउनुस अब हामीले आफ्नो स्वास्थ्य ठिक हुन के के खानुपर्छ भन्ने तर्फ लागौं ।
स्वस्थ जीवन र लामो आयु बाँच्नका लागि खान सकिने केही खानेकुराहरु
१. हरियो भटमासलाई उसिनेर, तरकारी पकाएर, सुप बनाएर वा टुसा उमारेर पनि खान सकिने हरियो भटमासलाई धेरै तरिकाले पकाएर खाने चलन छ । भटमासमा आइसोफ्ल्याभोन नामक तत्व पाइन्छ जसले शरीरमा पाइने विषादी, क्यान्सर तथा अन्य जिवाणु विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ ।
२. गाजरमा हुने बेटा क्यारोटिन सुन्तला रंगको हुन्छ । यो तत्वलाई हाम्रो शरीरले भिटामिन ए मा बदल्छ । न्यासनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थका अनुसार हाम्रो शरीरले भिटामिन ए उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले खाने खानेकुराबाट नै शरीरले भिटामिन ए प्राप्त गर्दछ । बेटा क्यारोटिनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, दृष्टि, प्रजनन तथा कोषिय सञ्चारको अभिवृद्धि गर्दछ ।
३. हामीले खानैपर्ने खानेकुराहरुमा हरिया तरकारीहरु जस्तै : बन्दा, ब्रोकाउली, सिमी, काउली, मूला, आदिजस्ता तरकारीहरु पनि पर्दछन् । यी तरकारीहरुमा भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन के, खनिज, पोटासियम, क्यालसियम, सेलेनियम, आदि तत्वहरु पाइन्छन् । यस्ता तत्वले लामो आयुसम्म बाँच्न राम्रो भुमिका खेल्दछ ।
४. गेडागुडीमा फाइबर, म्याग्नेसियम तथा पोटासियम प्रशस्तै पाइन्छ, र सबैले तपाईँको रक्तचापलाई स्वस्थ तरिकाले नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। यसले कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै किसिमको हानी पुर्याउँदैन। आफ्नो खानामा यस्ता बस्तु बढी समाबेश गर्नुहोस् ।
५. खाना चाहे जे जस्तो किन नहोस् राम्रोसंग चपाएर खाने गर्नुहोस् । कम खाने बानी बसाल्नुस यसले हाम्रो पाचनक्रियालाई सजिलो हुने र खाएको चाडो पच्न थाल्दछ । खाना खादा ज्यादा पानी नपिउनुहोस् यसले पाचनतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
नोट : स्वास्थ्य शिक्षा आजको आवश्याकता भन्ने नारालाई साकार पार्न सकियोस भन्ने उद्धेश्यले विगत लामो समयदेखि हामीले जानकारी पस्कदै आएका छौं । कतिपय बस्तु सेवन गराउदा जानकार व्यक्तिको खाँचो हुन सक्छ । औषधि होस् या जडिबुटी किन नहोस् सेवन गर्दा डाक्टर, वैद्यको परामर्शमा सेवन गर्ने गरौं भन्ने मेरो राय छ ।
स्वस्थ शरीरका लक्षणहरु
स्वस्थ्य जीवनशैलीका सूत्रहरू
स्वस्थकर जीवनको लागि यस्ता छन् हाँस्नुका फाइदाहरु
महिलाहरुले स्वस्थ रहन अपनाउनुपर्ने १० सुझावहरु
← घरमा सुख शान्ति ल्याउनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरु
विवाहपछि चम्किन्छ यो राशी हुनेहरुको भाग्य →
कालो तिल र यसको प्रयोग
मार्च 4, 2019 मार्च 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
तुलसीको बारेमा केहि जानकारी
नोभेम्बर 3, 2018 नोभेम्बर 3, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
महद्वारा विभिन्न रोगको उपचार
अप्रील 19, 2019 अप्रील 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
चाणक्य नीति अनुसार सुन्दर भएपनि यस्ता गुणहरु हुने स्त्रीसँग बिहे गर्नुहुँदैन
के हो सूचना प्रविधि (Information Technology) ?
नयाँ बर्ष २०७६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
मानिसलाई रिंगटा के कारणले लाग्छ ?